Ithegi: spf | Martech Zone
Uluseta njani uQinisekiso lwe-imeyile kwi-Microsoft Office (SPF, DKIM, DMARC)
NgoMvulo, nge-31 kaJanuwari, 2022 NgoMvulo, nge-31 kaJanuwari, 2022 Douglas Karr
Sibona ngakumbi nangakumbi imiba yokuhanjiswa kunye nabathengi kule mihla kwaye iinkampani ezininzi kakhulu azinabuqinisekiso be-imeyile obusisiseko obusekwe nge-imeyile yeeofisi zabo kunye nababoneleli ngenkonzo yentengiso ye-imeyile. Eyamva nje ibiyinkampani ye-ecommerce esisebenza nayo ethumela imiyalezo yenkxaso kwiMicrosoft Exchange Server. Oku kubalulekile kuba ii-imeyile zenkxaso yomthengi womthengi zisebenzisa olu tshintshiselwano lwemeyile kwaye emva koko zihanjiswa ngenkqubo yabo yenkxaso yamatikiti. Ngoko, kunjalo
Indlela yokuqinisekisa uQinisekiso lwe-imeyile yakho lumiselwe ngokuchanekileyo (DKIM, DMARC, SPF)
NgoLwesibini, Januwari 25, 2022 NgoLwesithathu, nge-26 kaJanuwari 2022 Douglas Karr
Ukuba uthumela i-imeyile kulo naluphi na uhlobo lomthamo, lishishini apho uthathwa ngokuba unetyala kwaye kufuneka ubonakalise ubumsulwa bakho. Sisebenza kunye neenkampani ezininzi ezibancedisayo ngokufuduka kwabo kwe-imeyile, ukufudumala kwe-IP, kunye nemiba yokuhanjiswa. Uninzi lweenkampani aziqondi nokuba zinengxaki kwaphela. Iingxaki ezingabonakaliyo zokuhanjiswa Kukho iingxaki ezintathu ezingabonakaliyo kunye nokuhanjiswa kwe-imeyile amashishini angayaziyo: Imvume - ababoneleli ngenkonzo ye-imeyile
Yintoni i-imeyile yoQinisekiso? I-SPF, i-DKIM, kunye ne-DMARC zicacisiwe
NgoLwesibini, nge-21 kaDisemba ngo-2021 NgoLwesibini, nge-21 kaDisemba ngo-2021 Douglas Karr
Xa sisebenza nabathumeli be-imeyile abakhulu okanye sibafudusele kumnikezeli wenkonzo ye-imeyile entsha (ESP), ukuhanjiswa kwe-imeyile kubaluleke kakhulu ekuphandeni ukusebenza kwemizamo yabo yokuthengisa i-imeyile. Ndikhe ndagxeka ishishini ngaphambili (kwaye ndiyaqhubeka) kuba imvume ye-imeyile ikwicala elingalunganga leequation. Ukuba abanikezeli benkonzo ye-intanethi (ISPs) banqwenela ukugada ibhokisi yakho yangaphakathi kwi-SPAM, kufuneka balawule iimvume zokufumana ezo imeyile.
Ukukhusela igama lakho kunye negama ekuthengiseni nge-imeyile ngeziQinisekiso zeMark eziQinisekisiweyo (VMCs)
NgoMvulo, Septemba 20, 2021 NgoMvulo, Septemba 20, 2021 UMark Packham
Abathengisi be-imeyile bayaqonda ukuba umkhankaso ophumeleleyo umalunga nokuhambisa kunye nokuthumela imiyalezo. Imalunga nokubandakanya amathemba kunye nokwakha ubudlelwane abanokubukhulisa ekuhambeni kwexesha. Ngokusisiseko, olo lwakhiwo lobudlelwane luqala ngodumo kunye nokuthembela kuhlobo lophawu: Uninzi (87%) lwabathengi behlabathi bathi bayalijonga igama lenkampani xa bethenga imveliso okanye inkonzo. Igama kunye neTrust zichaphazela njani iZigqibo zokuThengwa kunye nokuSebenza ngokuThengisa kodwa kugcinwa
NgoLwesine, Agasti 12, 2021 NgoLwesine, Agasti 12, 2021 Douglas Karr
Ukuba usebenzisa i-WordPress njengenkqubo yolawulo lomxholo, le nkqubo iqulunqelwa ukuba icofe imiyalezo ye-imeyile (njengemiyalezo yenkqubo, izikhumbuzo zephasiwedi, njl.njl. Nangona kunjalo, esi ayisosisombululo sicebisayo ngenxa yezizathu ezimbalwa: Eminye imikhosi ibhloka amandla okuthumela ii-imeyile eziphumayo kwiseva ukuze zingangqinelani nabagculeli ukuba bongeze i-malware ethumela ii-imeyile. I-imeyile evela kumncedisi wakho ayiqinisekiswanga